Governemanta Malagasy. Azo ho sokajiana toa ireto manaraka i
Raseta Joseph Delphin
ⓘ Governemanta Malagasy. Azo ho sokajiana toa ireto manaraka ireto ny firafitry ny governemanta Malagasy taorianny fidiranny vazaha. Isaky ny sokajy dia nahitana ..
Ny governemanta dia, amin ny ankapobeny, ireo manam-pahefana mitondra, manara-maso ary mandraharaha ny andriam-panjakan ny Firenena. Ny mpikamban ny governemanta iray dia atao hoe minisitra na sekreteram-pirenena. Ny governemanta no manapaka ary manatanteraka ny asa aman-tao ilaina amin ny fitondrana ny firenena. Ny governemanta no tompon andraikitra eo imason ny olom-pirenena. Amin ny siansa ara-tsôsialy, ny teny governemanta avy amin ny fiteny grika midika hoe "fitondrana sambo" dia ny fiantsoana izay rafitra mitondra firenena na fikambanana iray. Ny governemanta no mandrindra ny firenena.
Ny Praiminisitra no lehibenny fitondrana ao aminny firenena iray. Araka ny Lalàmpanorenana dia ny Filohanny Repoblika no manendry azy. Izy no lehibenny governemanta. Manolotra ireo ho mambranny governemanta aminny Filohanny Repoblika izy mba hotendrena. Ity ny lisitrireo Praiminisitra malagasy
Ny Lalampanorenana aminny firenena dia karazan-dàlana manoro ny fomba fiasanny governemanta. Milaza izy hoe ahoana mifidy ny filoham-pirenena, firy taona izy no tokony mijanona eo. Milaza koa ny lalampanorenana hoe inona ny lalàna azo apetraka, rahoviana ny olona vao afaka mifidy, ary ahoana ny manova ny lalam-panorenana. Miantoka ny fahafahana sy ny zonny fikambanana ny Lalampanorenana. Sahirana kosa nefa ny malagasy fa toa tsy hita ao ny makasika ny lalampanorenana malagasy satria nahoana tsy misy mijery akaiky ireo mpitondra fanajakana eto Madagasikara
Teraka tao Marovoay, faritanini Mahajanga ny faha-9 Desambra 1886. Zanaki Razaka Seta Tsimahafotsy dekan-dRainilaiarivony, Praiministra, ary notendreny ho governora hiahy ny fitrandrahana volamenam-panjakana tao Maevatanana. Niditra nianatra tao aminny kolejy quakers FFMA Faravohitra ary nifindra tao ao aminny Kolejy Masindahy Joseph AmbodinAndohalo. Tafiditra ho mpianatra mpitsabo ta aminny sekoly fianarana ho mpitsabonAntananarivo ny taona 1903 ary nahazo ny mari-pahaizana naha-mpitsabo taminny taona 1908.
I Joseph Franklin Rutherford, izay fantatra koa aminny aranana hoe "Mpitsara Rutherford", dia filoha faharoanny fikambanana Watch Tower Bible and Tract Society, izay niova anarana hoe Jehovahs Witnesses taty aoriana. Nitana anjara lehibe izy teo aminny fandaminana sy ny fivoarana ara-poto-pampianaranny Vavolombeloni Jehovah izy. Teraka taminny 8 Novambra 1869 tao Versailles ao Missouri sy maty taminny 8 Janoary 1942 tao San Diego tao Kalifornia i Joseph Franklin Rutherford.
ⓘ Governemanta Malagasy
Azo ho sokajiana toa ireto manaraka ireto ny firafitry ny governemanta Malagasy taorianny fidiranny vazaha.
Isaky ny sokajy dia nahitana governemanta iray na maro.
1. 1972 - 1976
Richard Ratsimandrava 5 Feb. 1975 - 11 Feb. 1975
Gabriel Ramanantsoa 11 Okt. 1972 - 5 Feb. 1975
Gilles Andriamahazo 12 Feb. 1975 - 15 Jio. 1975
Chef suprême du concile de Révolution:
Didier Ratsiraka 15 Jio. 1975 - 4 Jan. 1976
2. 1976 - 2002
Didier Ratsiraka 4 Janoary 1976 - 27 Marsa 1993
Albert Zafy 27 Marsa 1993 - 5 Sep. 1996
Norbert Ratsirahonana 5 Sep. 1996 - 9 Feb. 1997
Didier Ratsiraka 9 Feb. 1997 - 2002
Wikipedia: Governemanta Malagasy